Indlela sikhulisa ithimba lakho?
Abaningi kithi abake babhekana nale nkinga enzima yokwakha iqembu omuhle futhi unempilo obunobunye. Nguliphi licembu kungenziwa ngokuthi kahle? Omunye lapho bonke abasebenzi basebenze njengembumba lezidlo ezinamafutha akahle umshini lesihlanu? Noma omunye lapho isinyathelo ngasinye luyasetshenziswa bese uya ukusebenza njengoba iholidi?
Kanjani ukwakha ithimba lapho wonke umsebenzi uyazi futhi ngokucacile ukwenza umsebenzi wawo, iqembu uyakwazi ekufinyeleleni imiphumela emihle, iqembu lapho ufuna ukuza nsuku zonke? Indlela ukuhlela elikhiqizayo umsebenzi ithimba, isiyalo, ukuqapha kanye nokubika?
Isixazululo yonke le mibuzo kuphela abaphathi abanekhono futhi abanolwazi. Kodwa nakho - kuyofika isikhathi, ngakho zama ukubhekana nezinkinga ebaluleke kakhulu ekhanda.
Ukudluliselwa: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo.
Ungezi uzosebenzela - futhi esikuqondisa maqondana isixuku abasebenzi nge ezihlukahlukene ezindabeni. Ziyakwazi ekuseni line up emnyango ehhovisi lakho, elinde "kuyaphuthuma" yakho inkomba futhi ngaphandle ungakwazi kuxazulule lutho. Yini okumelwe uyenze? Into yokuqala okumele uyenze ukuthi kudingeka kwenziwe kuwe njengomphathi. Umsebenzi wakho ngawe akagcwalisi ubani. Okulandelayo - imibuzo abasebenzi.
Ithimba kufanele kube Kwabiwa ecacile yemfanelo ngumnyango ngamunye kanye nomsebenzi ngamunye. Kodwa ngamunye wabo kufanele kube hhayi kuphela imisebenzi yayo kodwa futhi unelungelo lokunquma. Kodwa iyini ngempela usalindeni izinqumo kusukela abasebenzi - kumele wathi emhlanganweni ojwayelekile noma ucacise omunye imibhalo.
reception kahle ukuphathwa - it is imithwalo yemfanelo ethile ukuze abangaphansi kwakhe. Le ndlela ngeke wehlise induna abanye imisebenzi elula isimiso umvumele ukuba bahlanganyele izindaba osendaweni ezibalulekile. Ukuphathisa abanye kuyazuzisa hhayi kuphela eliphakeme, kodwa futhi umsebenzi - kungcono uphawu ukwethenjwa ukwazisa imisebenzi emihle.
ukuxhumana Yangaphakathi - sempumelelo.
Ithimba kumele olususwe uhlelo ecacile ukuxhumana kwangaphakathi, futhi uhlelo abasebenzi vzaimootchetnosti neminyango. Futhi le nkinga akufanele raznotolkov ngoba ngokuvamile ukusatshalaliswa okungacaci amalungelo nezibopho kuyinto umthombo ukungqubuzana in iqembu! uhlelo vzaimootchetnosti kuzovumela abaphathi nokulawula ngendlela ephumelela kakhudlwana futhi elula ibhizinisi, landela isiyalo futhi umthwalo abasebenzi.
Ukuze umsebenzi ngamunye kubalulekile ukuba ningabi nje kuphela inkokhelo kanye nemibandela zokusebenza, kodwa futhi nesimo esihle kuleli qembu. Funda izinkinga zangaphakathi ukungqubuzana okuxazulula futhi kwenza umoya omuhle besebenza ethimbeni - lokhu ingenye imisebenzi ebaluleke kakhulu umholi ohlakaniphile. Yakha ubudlelwano eqenjini, namtjhana imbule ezifihliwe izinkinga zangaphakathi kungasiza wezengqondo abangakwazi ukudweba ekuqhubeni trainings yenkampani kanye nemicimbi.
Ukuze noma imuphi umholi kubaluleke kakhulu engasenathonya, ukuhlakanipha nezimfanelo ubuholi. Kodwa abaholi Asizalwa. Abaholi. Futhi ukuze basize kule isiqophi ukuqeqeshwa "turpentine abasebenzi."
Ukwenza imisebenzi ethize nokusetshenziswa okulula izinqubo zokuxhumana kanye ukulawula abasebenzi, uzofunda ngendlela ozoyala ngayo abangaphansi Uzofunda amathuluzi athile ezinemininingwane ugqozi Okuyınqo, ukulawula kanye nabasebenzi zokuphatha.
Kanye video tutorials Uzophinda uthole izifanekiso kwezinye iziqondiso uzodinga ukushintsha kancane kuphela ngaphansi ibhizinisi layo kanye nokuqalisa ku umkhuba kwansuku zonke.
Sikhala - kuyindlela yokuzuza isimo civil inceku isikhulu
Lapho ukutshala ruble 500,000 ukuze uthole? Imibono, ukubuyekezwa
LCD "Ethile", Kazan incazelo kanye nokubuyekeza
AMD Radeon-R5 M230 - ikhadi